August | 2009 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
Pwintphyu Nandar – Miyazaki the master of Anime and his hit-movies
မီယာဇာကီရဲ့ ကလေးလူကြီးအသည်းစွဲတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်များ
ပွင့်ဖြူနန္ဒာ (မောင်ရစ် ဘာသာပြန်တယ်)
ဒီတခါလည်း မီယာဇာကီတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူက အလွန်ကို ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အယ်နမီ (anime) ကာတွန်းရုပ်ရှင်တပုဒ် ဖန်ဆင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ သည်တကြိမ်မှာ လူသား ကောင်လေး ဆိုစကီး နဲ့ ငါးသူငယ်မလေး ပိုညိုတို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်နံမည်က ငါးသူငယ်မလေးနံမည် – ပိုညို ပါတဲ့။ အနောက်တိုင်းကလေးပုံပြင်တခုဖြစ်တဲ့ ရေသူမပုံပြင်ကို ဈန်ဝင်စားပြီးတော့ မီယာဇာကီက သူရဲ့ အနုပညာမှော်အတတ်နဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ အငွေ့အသက် ရှုခင်း ရနံ့တွေနဲ့ “ပိုညို” ကို ဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on August 31, 2009 in Reviews
တိုက်ပွဲအတွင်း “တပ်မတော်သား ကျဆုံး ၁၁ ဦး၊ ဒဏ်ရာရ ၃၄ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျဆုံး ၁၅ ဦး၊ ဒဏ်ရာရ ၁၃ ဦး၊ ဦးဖုန်ကြားရှင်ကို သစ္စာခံသော ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အလောင်းရှစ်လောင်း” ကို တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on August 31, 2009 in Burma News Headlines
students’ movement 21
ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၂၁)
၁၉၈၈ – ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ (ဒုတိယပိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းမှာ အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ် ချေမှုန်းမှုတွေ အောက်မှာ ၁၉၇၆ မှိုင်းရာပြည့် နောက်ပိုင်း တိမ်မြုပ်နေခဲ့ရပေမဲ့ ၁၂နှစ်ကြာတဲ့ အချိန် ၁၉၈၈ – ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှာတော့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ပြန်လည် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါပြီ။
မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ မိုးသီဇွန်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ဗကသဟာ ၈၈ – ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံမှာ တပ်ဦးက ပါဝင်ခဲ့တာကို တွေ့ရမယ်။ ဗကသရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်မှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး တိုက်ပွဲဝင်လာကြတာပါ။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on August 31, 2009 in Aung Way
ယိုးဒယား ရုပ်မြင်သံကြား နံပတ် ၇ လိုင်းမှာ ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတို အစီအစဉ်တွေ လာတတ်တယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကြုံရတတ်တာတွေပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရိုက်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး စိတ်ဝင်စားအောင် တင်ဆက်ထားတာတွေ။ တခါလွှင့်ရင် ဇာတ်လမ်း လေးငါးခု ပေါင်းပြီး လွှင့်တတ်တယ်။ စကားနားလည်တဲ့ သူနဲ့ အတူ ကြည့်ထားသမျှတွေထဲက ပြန်ပြောရရင် – – Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on August 31, 2009 in Lighter Side
pieces of news stories in the willows
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ၊ စိစစ်ရေးရုံး၊ ကာတွန်းဆရာ အကြံပြုချက်၊ လက်နက်ငယ် အဖွဲ့ ၃၀
စိစစ်ရေးရုံးက နေပြည်တော်ကို အထိမခံ
ခုတလော လေထန်ကုန်း၊ လေအန်ကုန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များမှာ ပြောနေကြတဲ့ထဲမှာ နေပြည်တော် အကြောင်းလည်း ပါပါတယ်။
ဂျာနယ် တစောင်က မထည့်မနေရ နိုင်ငံတော်ဆောင်းပါး တပုဒ်ရဲ့ ခေါင်းစည်း မဆိုစလောက် မှားသွားတယ် တဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရွှေပြည်တော် မျှော်မဝေးပြီမို့ ဆိုတဲ့ လူမဖတ်တဲ့ ဆောင်းပါးရှည်ကြီးမှာပါ။ “ရွှေပြည်တော်” အစား “နေပြည်တော်” လို့ စာစီစာရိုက် ချို့ယွင်းသွားတာပါ။ Read the rest of this entry »
30th H1N1 patient in Rangoon
အယောက် ၃၀ မြောက် ၀က်တုပ်ကွေး လူနာ ရန်ကုန်တွင် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခဲ့ပုံရ
ရန်ကုန်တွင် အယောက် ၃၀ မြောက် H1N1 တုပ်ကွေး ဝေဒနာသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ယနေ့ထုတ် မြန်မာ သတင်းစာများတွင် ရေးထားသည်။
ယခင်က ရောဂါပိုး တွေ့သူများမှာ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လာကြသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆိုပါ အယောက် ၃၀ မြောက် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ပြည်ပခရီးမှ ပြန်လာသူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြမထားပေ။ Read the rest of this entry »
SPDC vs. US
အမေရိကန်အပေါ် မကောင်;မြင်မှုများကို အသားပေးသည့် ဖော်ပြချက်များကို
ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့အထိ သတင်းစာများတွင် တွေ့ရသည်
မြန်မာသတင်းစာများတွင် “အမေရိကန် နှင့် အပေါင်းအပါတပ်ဖွဲ့ဝင်များ” ၏ လက်ချက်ကြောင့် အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတို့တွင် အရပ်သားများ ဒဏ်ရာရ သေဆုံးကြသည့် အရေအတွက်များ ဖော်ပြနေခြင်းကို သောကြာနေ့က စတင်ပြီး ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on August 31, 2009 in Local News Headlines